China Glass lotion bottle Factory, Glass lotion bottle တင်သွင်းသူ
Glass Cream ပုလင်း
အခြား Accessories များ
စျေးနှုန်းချိုသာသော 100ml (3oz) အလှကုန်အတွက် Essential Oil bo...
အရောင်းရဆုံး Skin Care Serum 30ml Blue Amber Green Clear...
Transparent French Square Mini 2oz Wine Glass Juice...
2021 အသစ်ရောင်းမည် 250ml 500ml ပါးစပ်ပြားချပ်ချပ် jui...
500ml 16 အောင်စ ဖျော်ရည်ပုလင်း ထုတ်လုပ်သူ ဗလာဗကို ရှင်းပါ...
50ml 100ml 200ml 250ml 350ml 500ml Cold Brew ကော်ဖီ...
ရေချိုးခန်းမီးဖိုခန်းအတွက် သံမဏိစတီးလ်ပန့်ပါသော 18 Oz ကြည်လင်သော ပြန်ဖြည့်နိုင်သော အရည် လက်ဆပ်ပြာရည် ဖန်ရည်ပုလင်း
1. သင့်မီးဖိုချောင် သို့မဟုတ် ရေချိုးခန်းအတွင်း ကောင်တာပေါ်တွင် ထားနိုင်သည့် သန့်ရှင်းသော၊ ခေတ်မီသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ဖန်ရည်ပုလင်း။ ဤခေတ်မီစတိုင်အရည် ဆပ်ပြာရည်သေနတ်သည် သင့်အိမ်၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းအပြင်အဆင်ကို ခပ်မိုက်မိုက် စတိုင်လ်ကျကျ၊ .
2.အရည်ဆပ်ပြာ၊ ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာ၊ ဆေးရည်၊ ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောစပ်ထားသော၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောခြင်း၊ ခံတွင်းသန့်ဆေး၊ လက်သန့်ဆေး၊ အနှိပ်ဆီများ၊ အစားအစာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားအရာများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။3. ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော stainless steel dispenser top ဖြင့် တာရှည်ခံနိုင်သော အထူဖန်ပုလင်း။ပြောင်လက်တောက်ပသော ဒီဇိုင်း 16 Oz Boston Round ပုလင်းသည် ပန်းကန်ဆေးစက်တွင် ဘေးကင်းပါသည်။ ပြန်သုံးနိုင်သော GLASS ပုလင်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကူညီပေးပြီး ပလပ်စတစ်ပုလင်းများမှ အရည်များသို့ ပေးပို့နိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
97ml 200ml 524ml အခမဲ့ ပြန်ဖြည့်နိုင်သော အလွတ် သိုလှောင်မှု ကွန်တိန်နာ Clear Glass Bottle with gold Lotion Pump ဖန်ဆေးရည်ပုလင်း
1. သင့်မီးဖိုချောင် သို့မဟုတ် ရေချိုးခန်းအတွင်း ကောင်တာပေါ်တွင် ထားနိုင်သည့် သန့်ရှင်းသော၊ ခေတ်မီသော ဒီဇိုင်း ဖန်ရည်ပုလင်း။ ဤခေတ်ဟောင်းစတိုင်အရည်ဆပ်ပြာဆေးရည်သည် သင့်အိမ်၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းအပြင်အဆင်ကို သပ်ရပ်လှပသော၊ လယ်အိမ်၊ စက်မှုခန်း သို့မဟုတ် အလွန်ခေတ်မီသည်ဖြစ်စေ .
အိမ်သုံးရေချိုးခန်းအတွက် 481ml သန့်ရှင်းသော အစားထိုးဆပ်ပြာ/Hand Sanitizer Dispenser Glass lotion bottle
အနက်ရောင် lotion pump ပါသော လက်သန့်ဆေးရည် ပယင်းဖန်ခွက် 8oz 16oz ဖန်ပုလင်း
[ပယင်းဖန်ခွက်အလွတ်ပုလင်း] 8oz 16oz Amber Glass Lotion Bottles အနက်ရောင် Pump ပါသော ပုလင်းများ - ၂ထုပ်
[UV RESISTANT] ပယင်းမှန်သည် အန္တရာယ်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ပါဝင်မှုများကို ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် အလင်းထိခိုက်နိုင်သော ထုတ်ကုန်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်သည်။၎င်းသည် အမြင့် 168 မီလီမီတာ (ပန့်အပါအ ၀ င်) x 58 မီလီမီတာရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပန့်များသည် အရွယ်အစားအထိ အလွယ်တကူဖြတ်တောက်နိုင်သည့် စံအလျားလိုက်ပြောင်းနိုင်သော ကွေးညွှတ်ပြွန်ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
[လက်ဆေးရည်အတွက် ဗူးများ] သင့်အိမ်၊ ဥယျာဉ်၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းသုံး ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများကို သင့်ကိုယ်ပိုင် DIY ထုတ်ကုန်များ ပြုလုပ်ပါ။အိမ်လုပ်ဆေးရည်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ လက်သန့်ဆေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ဆပ်ပြာကို ဖြန်းပေးခြင်းအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
[BPA အခမဲ့၊ ECO-Friendly၊ REFILLABLE] UK တွင် 45% ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အဆိုပါပန့်ပါသည့် စတိုင်ကျသော ပယင်းဖန်ပုလင်းကြီးများသည် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရနိုင်သော ဆပ်ပြာရည်/ lotion dispenser အဖြစ် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ဖန်ခွက်သည် Bisphenol A သို့မဟုတ် Phthalates ကဲ့သို့သော ပလတ်စတစ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဓာတုပစ္စည်းများ ကင်းစင်ပါသည်။
[AVALON အလှကုန်ထုပ်ပိုးမှု] Avalon အလှကုန်ထုပ်ပိုးမှု စတိုးဆိုင်မျက်နှာစာတွင် ရရှိနိုင်သော နောက်ထပ်အရွယ်အစားနှင့် စတိုင်များ
လက်ကား 36ml 64ml 129ml 502ml အလှကုန်အပြာရောင် ဘော့စတွန်ဝိုင်း ဖန်ပုလင်း
【အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်း】 ဤ ဘော့စတွန်ဖန်ပုလင်း သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ် ပုလင်းများကို ခိုင်ခံ့လှပသော ဖန်ခွက်များ၊ ထူထဲသော အနက်ရောင် ပလပ်စတစ်အဖုံးများနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆီလီကွန်ထိပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
【မျိုးစုံအသုံးပြုမှု】 DIY မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများ၊ ကော်လံများ၊ ဖျော်ရည်များ၊ အလှကုန်များ၊ ရေမွှေးဆီများ၊ မုတ်ဆိတ်ဆီ၊ ဆံပင်ဆီ သို့မဟုတ် အခြားအရည်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။eye droppers များသည် ထုတ်ကုန်ပမာဏကို အချိန်တိုင်းသုံးရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
【Ideal Travel Bottles】အဆင်ပြေသောအရွယ်အစားသည် Leak-Proof ကာဗာများအဖြစ် အိတ်များတွင် ခရီးသွားရန် သင့်တော်ပါသည်။ နေ့စဉ်မျက်လုံး၊ မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ် စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အရည်များဖြင့် ခရီးသွားနိုင်ပါသည်။
【UV ဒဏ်ခံနိုင်မှု】 ဖန်ပုလင်းသည် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပယင်းမှန်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပုလင်းသည် BPA ကင်းစင်ပြီး ခဲ-အခမဲ့ဖြစ်ပြီး သင်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် ရေမွှေးများကို UV rays နှင့် လျှင်မြန်စွာအငွေ့ပျံခြင်းအန္တရာယ်မှ ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး စုံလင်စွာကာကွယ်နိုင်စေရန်အတွက် UV ခံနိုင်ရည်ရှိသောပယင်းမှန်ပါရှိသော ခဲ-အခမဲ့ဖြစ်သည်။
【ပေါက်ကြားမှုအကာအရံဒီဇိုင်းများ】ဝက်အူချည်ပြီးသော ပုလင်းပါးစပ်ကို တင်းကျပ်စွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရွှေရောင်ချထားသည့် အလူမီနီယံအလွိုင်းထုပ်နှင့် လိုက်ဖက်ပြီး အရည်ယိုစိမ့်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Eco Cosmetic ထုပ်ပိုးမှု Lotion Container 30g (1oz) Frosted Cream အိုး ပလပ်စတစ်အဖုံး
Xuzhou Cui Can Glass Products Co., LtdJiangsu ပြည်နယ်၏ Xuzhou မြို့၌ တည်ရှိပြီး သုတေသန၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း အစရှိသည့် ဖန်ထည်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို သုတေသနပြုခြင်း၊ အလှကုန် ဖန်ပုလင်းများ၊ ရေမွှေးဖန်ပုလင်းများ၊ ဖန်ဝိုင်ပုလင်းများ၊ ရှန်ပိန်ပုလင်းများ၊ အဖျော်ယမကာနှင့် အရက်ပုလင်းများ၊ အစားအသောက်ထုပ်ပိုးသည့်ပုလင်းများ၊ ဆေးပုလင်းများနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
Hot Sale Skin Care Serum 30ml အပြာရောင် Amber Green Clear Glass Dropper Bottles Essential Oil Bottles
Designer 35ml 47ml 50ml Decorative Elegant Premium Lady Round Shape Spray ရေမွှေးပုလင်း
Xuzhou Cui Can Glass Products Co., LtdJiangsu ပြည်နယ်၏ Xuzhou မြို့တွင်တည်ရှိပြီး အလှကုန်ဖန်ပုလင်းများ၊ ရေမွှေးဖန်ပုလင်းများ၊ ဖန်ဝိုင်ပုလင်းများ၊ ရှန်ပိန်ပုလင်းများ၊ အဖျော်ယမကာနှင့် အရက်ပုလင်းများ၊ အစားအသောက်ထုပ်ပိုးပုလင်းများကဲ့သို့သော ဖန်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို သုတေသနပြုခြင်း၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းတွင် အထူးပြုပါသည်။ ဆေးပုလင်းများနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသော 100ml (3oz) အလှကုန်များတွင် dropper အဖုံးပါသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပုလင်းကို အသုံးပြုပါ။
Mapo စက်မှုပန်းခြံ၊ Mapo မြို့၊ Tongshan ကောင်တီ၊ Xuzhou၊ Jiangsu၊ တရုတ်နိုင်ငံ
2022 ခုနှစ်အတွင်း ဖန်ပုလင်းဈေးကွက် ခန့်မှန်းချက်...
ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်စကများ မြင့်တက်လာသည်...
© မူပိုင်ခွင့် - 2011-2021 : All Rights Reserved.
ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, Reed diffuser ပုလင်း, ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး, ဖန်ရည်ပုလင်းများ, ဘီယာ ဖန်ပုလင်း,